Warbixinta ku saleysan heerarka waa qaab lagu cabiro waxqabadka tacliimeed ee ardaydeena marka loo eego heerarka heerka fasalka. Jaangooyooyinku waxay tilmaamayaan waxa ay tahay inay dhammaan ardaydu ogaadaan oo ay awoodaan inay qabtaan, iyo sidoo kale heerka ay ugu baahan yihiin inay ku ogaadaan.
Ardayda dugsiga hoose waxaa la siin doonaa dhibco ku saleysan heerka ay ku muujiyaan aqoonta heerka, halkii laga siin lahaa sida uu isagu / iyadu wax u qabteen marka loo eego ardayda kale.
Diiradu waxay saaran tahay caddaynta barashada, maaha u hoggaansamida ama dhibcaha urursiga.
Warbixinta ku saleysan heerarka:
waxay ardayda ka dhigtaa kuwo aad uga warqaba waxa laga filayo iyaga. Ardaydu waxay sifiican u fahmi doonaan horumarkooda tacliimeed ee hadda jira ee laxiriira meesha ay ubaahanyihiin inay ahaadaan dhamaadka sanadka.
Waxay u ogolaataa macalimiinta inay siiyaan qoysaska sharaxaad dheeri ah oo ku saabsan xirfadaha iyo fikradaha loo baahan yahay si ardaydu u muujiyaan aqoonta heerka.
waxay macallimiinta u suurta gelisaa inay si wanaagsan u fahmaan heerka waxqabadka ardayga ee heerka iyo sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo tillaabooyinka waxbaridda ee soo socota ee horumarka waxbarashada.